Taliyihii hore ee ciidanka asluubta soomaaliyeed Cabdi Maxamed Ismaaciil oo gacanta lagu soo dhigey. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Wararka Taliyihii hore ee ciidanka asluubta soomaaliyeed Cabdi Maxamed Ismaaciil oo gacanta lagu...
Taliyihii hore ee ciidanka asluubta soomaaliyeed Cabdi Maxamed Ismaaciil oo gacanta lagu soo dhigey.
Taliyihii hore ee ciidanka asluubta soomaaliyeed Cabdi Maxamed Ismaaciil ayaa waxaa gacanta ku soo dhigey ciidamada amniga qaranka soomaaliya iyadoo sida la sheegey in mudo ah lagu daba jirey.
Cabdi Maxamed ismaaciil ayaa hore ugu xukunnaa xabsi daa’im iyadoo lagu eedeeyey in uu xiriir la lahaa xarakada dagaalyahanada alshabaab,sidoo kale wuxuu sii daayey baa la yiri rag alshabaab ah oo xabsiga dhexe ku jirey,sidoo kale wuxuu xabsiga dhexe u dhiibey nin Alshabaab ah.
Waa markii ugu horeysey ee shaqsi darajadan iyo xilkan soo qabtey la shaaciyo in la soo qabtey isagoo xabsi daa’im ku xukuman,sida uu sheegey taliyaha ciidamada ka hortaga denbiyada,waxeyna kusoo beegmeysaa iyadoo boliska somaliya ay sheegeen in aan la ogolaandoonin hub magaalada lagu dhex wato.
Previous articleDawladda federalka ah oo burburin rabta dhismaha Daahir Bakiin ex kuraasyacad ee km4.
Next articleMadaxweyne Xasan sheekh oo dalka dib ugu soo laabtey kadib booqasho turkiga uu ku tagey.